Renewable simba muSouth America | Green Renewables
Renewable simba muSouth America
Mumakore achangopfuura muLatin America akati wandei simba rekugadzirisa kutungamira mukujekesa kwakasimba kwesimba rinowedzerwazve.
Chakanyanya kubatsirwa raive zuva, inova tekinoroji inowedzerwazve zvakachipa uye inowanika pasi rose.
Semuenzaniso, muColombia photovoltaic simba chikamu chechirongwa chinonzi PaZa Rukova, iyo inounza chiedza netariro kunharaunda idzo kwamakore dzakavharidzirwa nehondo dzehondo uye kutengeswa kwezvinodhaka.
Kune rimwe divi, nyika dzinofarira Chile kuti mugore ra2012 nyika yaingova ne5MW yesimba rezuva, nhasi vane zvinopfuura 362MW uye 873 MW iri kuvakwa.
5 Dzimwe nyika
Pakati penyika dzakasiyana dzeLatin America, Chile ndiyo inotungamira kuiswa kwerudzi urwu rwesimba. Mishumo yakati wandei inoratidza kuti "nemusika wayo wakasimba wemasevhisi makuru, Chile yakatungamira dunhu iri kuisa mafotovoltaic muna 2014, inomiririra zvinopfuura makota matatu ehuwandu kubva kuLatin America ". Anowedzera zvakare kuti "chete muchina yechina Chile yakaisa zvakapetwa kaviri huwandu hwegore rose hweLatin America muna 2013.
Inonyanya kukosha ndeyekuti Chile akatanga muna 2013 ine 11 megawatts chete akaisirwa simba rezuva. Iko kumhanyisa uko nyika yafambira mberi yakakuisa semutungamiri wedunhu, pamberi peMexico neBrazil, maererano nekukura.
Muchokwadi, Chile yakaisa mari kupfuura 7.000 mamiriyoni emadhora mukuvandudzwa kwesimba rinowedzerwazve mukati memakore manomwe apfuura, ayo anosanganisirawo biomass, hydroelectric, mhepo.
Muenzaniso weizvi ndiwo anopfuura makumi masere mapurojekiti ezuva uye emhepo anotenderwa makore apfuura.
Argentina zvakare iyo yanga yaramba isina basa uye isingakendengi kune iyo inowedzerwazve shanduko, yatanga kupwanya chando nekusimudzira simba rezuva. MuJujuy, semuenzaniso, kune 100% simba rezuva dhorobha iro rakaratidza shanduko iri kuitika muArgentina. Nyika inotarisira kuburitsa 8% yesimba rayo renyika matrix vachishandisa zviwanikwa zvinowedzerwazve mumakore mashoma.
Mexico yakaparura gore rino chikamu chekupedzisira cheimwe yezvirimwa zvikuru zvezuva muLatin America. Aura Solar ini ndakaisirwa muBaja California Sur mumwedzi minomwe chete uye kubva munaGunyana 2013 yakatanga kushandura mwaranzi yezuva mukuchinjisa yazvino, iyo inotosvika chikamu chenyika.
Gore rino, chirimwa chichavhurika chizere, ichigadzira simba rakachena kupa mamirioni emaMexico. Zvivakwa zvaro zvinotora 100 mahekita eLa Paz Industrial Park. Hurumende yeMexico inoratidza kuti iyo Aura Solar chirimwa ine 131.800 maseru ichaderedza kusvibiswa nemakumi matanhatu ezviuru matani eCO60 pagore.
Zvakare nyika dzakaita sePeru dziri kukurudzira kushandiswa kwesimba rezuva. Dambudziko rechikamu ichi kuunza simba kune 2,2 mamirioni ePeruvians munzvimbo dzekumaruwa kuburikidza nekuwedzeredzwa kwenetwork uye mhinduro dzisiri dzechiitiko dzakadai semasolar panels, ayo acha kupihwa mari, kuisa, kushanda uye kugadzirisa chirongwa. Kusvika zviuru mazana mashanu ezviuru zvemagetsi ezuva. .
En Panama, Makambani makumi matatu nematatu akatora chikamu chekutanga chekutenga kwesimba guru rezuva gore rapfuura. Iyo purojekiti iri kuisa kunze kwethenda 31 MW ine investments yemamiriyoni zana nemakumi masere emadhora
Guatemala Iyo ine imwe yeakakura mafotovoltaic zvirimwa mudunhu iine 5 MW yesimba uye angangoita zviuru makumi maviri emagetsi ezuva. Vhiki rino Eduardo Font, General Manager wePainsa pepa indasitiri, akati ivo vanoronga kudyara kwemamirioni gumi nemaviri emadhora muchirimwa chezuva che20MW.
YeGerman Development Bank (KFW) yakapihwa E Savhadho chikwereti chemamirioni makumi matatu emadhora echikwereti kumakambani emagetsi emagetsi madiki nepakati nepakati, zvikuru zuva. Hurumende yeEl Salvador nemakambani emagetsi matatu akasaina makondirakiti mana ekugadzirwa uye kupihwa megawatts makumi mapfumbamwe nemana emagetsi ezuva nemari inosvika madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora.
Honduras Ndiyo nyika inotungamira muzuva mune ese Central America uye yechitatu mukukura muLatin America. Munguva pfupi, yakagadzira gumi nemaviri ezuva ezuva muCholuteca nedzimwe nzvimbo dzenyika.
Muna 2013 China uye Kosita Rika yakasaina zvibvumirano zvemamirioni makumi matatu emadhora ekubhadhara kuiswa kwezviuru makumi mashanu ezviuru zvemasolar. Zvakare pakutanga kwegore rino iyo Costa Rican Electricity Institute (ICE) yakazivisa kufambira mberi kwechirongwa chekutyaira chekushandisa simba rekugara rezuva rinotarisira kusvika kune zviuru mazana matanhatu zvevatengi. Mumakore manomwe apfuura, 30 bhiriyoni emadhora akaisirwa muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvinowedzerwazve magetsi (zuva, mhepo, magetsi emvura, pakati pevamwe).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Renewable simba muSouth America
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kusimudzira kusimudzira
Cepsa ichagadzira purazi yayo yekutanga yemhepo muAndalusia